Sunungura Chiwuno Kuti Usununguke Kuita Chikapa Sunungura Chiwuno Kuti Usununguke Kuita Chikapa
Sunungura Chiwuno Kuti Usununguke Kuita Chikapa
Chikapa chinodawo kuti uku uri kuita nechiwuno uku uri kunzwa pfungwa dzako dzichibvuma kuti pano ndiri kuita zvakanaka nokuti ndiri kunakirwa, ukuwo muromo uri kuratidza kuti zviri kuitwa ndizvo paBonde.
Chikuru kutenda kumurume amisa nhengo kuti unakirwe saka iwe mukadzi ukango nyarara semunhu azvimamira hazvizo nakidza, itawo semukadzi asungwa neWETI aona muToilet mune Munhu, kkkkkk munongo ziva kutamba kunoita Munhu aPRESWA neWeti, ingori left right tambe tambe right left unonzwa kushinyira munhu akuti, iwe kurimidza toda kupindawo left right tambe tambe chewu kutatisa vanhu saka tambayi kunge muri kunzwa NDOMBOLO kana RAGGA.
Munhu chemererawo zvinoenderana nezvauri kuita kwete kuda kuzviita varungu fuck me baby fuck me BaRudo kwako kugona chirungu here?
Itawo pachivanhu ipapo Nyathie ...
Nyathie kani imi Nyathie Amai kaani ...
Aaaghh Nyathie mondiuraya ...
Ukadaro chete kuchemerera ikoko neMutupo kuno kubatsira kurerusa muviri kuti ukasire kusvika. Kana usiri munhu uya anongoti kupinzwa wototanga wega kuchemerera, apa dzidzira kusaruma mazino kana uchi isa, usatye kutaura zviri kuda kubuda pamuromo rega mazwi anoda kubuda abude pamuromo wako.
Chikapa kusimukira nekutambirira kunoitwa nemukadzi akararwa nemurume. Dzimwe nguva anenge achiita seanonyora 8 kana kunyora C kana Y nechiuno chake. Imwe time oita seanotamba rhumba. Kana wakamboona pano pepetwa chibage, nyemba kana mupunga ndozvinenge zvichiita mukadzi nechiuno chake panguva yacho.
Mukadzi haafaniri kuita sechitunha pakuisana. Chikapa chinokwidza temperature yenhengo vonzwa kunakirwa nekuisa.
Mukadzi akanyatsobatwa nekuyamwiwa mazamu ahatumwe kuita chikapa but they do thega kuita senhengo yaona mukadzi aka gara beya inomira yega nekuti yafarira zvaona maziso zvikaisa pfungwa paZvimbo saka nhengo yamira.
Mukadzi aka gona kutaura pabonde, nekuchemerera ega chikapa hachinetse, saka murume anobva azivawo kuti ari kugona basa kuratidza kuti ari kunaka.
Varume vazhinji havadi zvokuchemerera kana vanakirwa. Unongonzwa wega murume aku gomera oda kuno tunda.
Vakadzi zivayi kuti Chikapa hunyanzvi hwepabonbe saka zvinotodzidzwa. Saka iwe kana usiri kuziva chikapa taura naNYATHIE kana kutangira pauri ipapo asi ita shungu yekuda kushandisa chiuno chako. Ita shungu yokuda kusunga nhengo yemurume wako. Ita shungu yekuda kuve neFREEDOM YEZVIRI KUITIKA pakuisana nemurume wako.
Iwe mukadzi kana wazvibata zvese izvi chikapa chino rwadza kana wakaisa makumbo pamafudzi emurume. Chokwadi ipapo kuti une chiuno kana kuti hauna hazvina basa. Murume anokuita nhapwa yebonde chaiyo pakadaro. Unongonzwa uchikurungwa sebota riri pamoto.
Asi mamwe maitiro anoita kuti chiuno chishande zvakanaka. Kana wangozvitanga, hauzombo rega kuda kutambisa chiwuno chako paBonde.
Iwe mukadzi tanga nhasi kufadzana nemurume wako.
Iye achakuudza kuti mudiwa wagona bonde nhasi ndanakirwa.
Saka ndoda kuchiona nyaya dzenyu ndinoda kuti varume venyu vazive kuti imi modawo bondei kupfuura ivo varume wenyu. Saka muvabate kuti vagare vane pfungwa yokuti bonde mazuva ese. Akaona mukadzi wemuRoad ano munyemwerera anobva ati mumoyo make ini kumba ndine shasha yangu inondi gonera paBonde.
Nguva yekuti wabviswa bhurugwa kuti murume afare iwe usaite sekungoita kunge wamanikidzwa kuiswa. Kana wabvuma kuiswa nemurume wako chitaridza kuti murume wako uye ane kodzero yezvinhu izvi.